အဖကေို့ ခဈြတယျပွောဖို့ မရှကျပါနဲ့ . . . - Tameelay
အဖကေို့ ခဈြတယျပွောဖို့ မရှကျပါနဲ့ . . .
အဖဆေိုတာ ဝမျးနညျးလှယျပွီး မမှေးခဲ့ပမေယျ့ အမဗေို့ကျထဲမှာ မငျးကို လှယျထားရတဲ့အခြိနျကစလို့ အတှေးထဲမှာ အမွဲ လှယျထားရတဲ့သူပါ
ငါ့သားလေးမှေးလာရငျ ငါ့သမီးလေး မှေးလာရငျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မောရပနျးရကောငျးမှနျးမသိ ပငျပနျးရကောငျးမှနျးမသိ နပေူပူမိုးရှာရှာ အလုပျတှေ လုပျပွီး ပိုကျဆံတှေ ရှာခဲ့တာ အလုပျတှေ ကွိုးစားခဲ့တာ အဖပေါ ။
အမနေို့ဖိုးကို တဈသကျဆပျလို့ မကုနျဘူးတဲ့ အဲ့လိုပါပဲ အမကေနျြးကနျြမာမာနဲ့ နို့ခြိုတိုကျကြှေးနိုငျအောငျ အဖလေဲ ခြှေးနဲ့ ရငျးခဲ့တာပါ အဖခြေှ့ေးဖိုးကိုလဲ မမေ့ထားကွနဲ့
အဖဆေိုတာ သိပျခဈြတတျတဲ့ လူကွီးတဈယောကျ ကမ်ဘာမှာ အခဈြတတျဆုံးလူကွီးတဈယောကျပါပဲ ။ သားတှေ သမီးတှေ မကျြနှာမကောငျးတဲ့ အခါ အမအေ့နားကပျပွီး ငါ့သားဘာဖွဈနလေဲ မသိဘူး မေးကွညျ့ပါဦး ငါ့သမီးအဆငျမပွဘေူးလား မသိဘူး မေးကွညျ့ပါဦးနဲ့ အမွဲ နားပူနာဆာလုပျတတျတဲ့လူလေ
မခဈြပွတတျခဲ့တာ ခဈြတဲ့အကွောငျးပွောဖို့ သတိမရခဲ့တာ ထမငျးဗူးပွငျပေးတဲ့အမကေို့ ကြေးဇူးတငျတတျကွသလို ဆနျအိုးထဲ ဆနျရှိအောငျ ရှာပေးတဲ့ အဖကေို့လဲ ကြေးဇူးတငျဖို့ မမနေဲ့
အရမျးကို စိတျပူတတျပမေယျ့ ဒေါသတှပေဲ ထှကျပွတဲ့အခါ နားလညျပေးပါ အဖဆေိုတာ လူဆိုးကွီးမဟုတျ ကြှနျတော့ကိုဆို အမွဲ အပွဈပဲတငျတယျ အမွဲဆူတယျဆိုပွီး စိတျထဲမထားနဲ့ သူ့ဘဝမှာ ဖွဈမလာတဲ့အရာတှေ ပိုပွီးမြားတဲ့ အဖကေ ကိုယျ့သားကိုယျ့သမီးအပျေါပိုပွီး မြှျောလငျ့ခကျြထားတတျကွတယျ
ဆငျးရဲတဲ့ မိဘတှကေ ကိုယျ့သားကိုယျ့သမီးတှကေို ခမျြးခမျြးသာသာနစေခေငျြတာမြိုး စာမတတျတဲ့ မိဘတှကေ ကိုယျ့သား ကိုယျ့သမီးကို ပညာတတျကွီး ဖွဈစခေငျြတာမြိုး အဲ့လို သူတို့ဘဝတှနေဲ့ မတူတဲ့ ဘဝတှကေို ရစခေငျြ ရောကျစခေငျြကွတာလေ
တဈခါတဈရံ အဖေ ဒေါသတှေ ထှကျတယျဆိုရငျတောငျ အဲ့တာ ဂရုဏာဒေါသောပါ ဖွဈစခေငျြလှနျးတဲ့စိတျနဲ့ အားမလို အားမရ ဖွဈတတျတာပါ
ကြှနျတျောတို့က အသကျအရှယျနဲနဲလေးရလာတဲ့အခါ အဖကေို့ ခဈြတယျပွောဖို့ မတေ့တျလာကွတယျ ငယျငယျကလို ကိုယျလိုခငျြတာရလာတဲ့အခါတိုငျး အဖပေ့ါးကို နမျးခဲ့သလို အသကျကွီးလာတဲ့အခါ အဖပေ့ါးကို နမျးဖို့ မရှကျပါနဲ့။
အဖေ့ကို ချစ်တယ်ပြောဖို့ မရှက်ပါနဲ့ . . .
အဖေဆိုတာ ၀မ်းနည်းလွယ်ပြီး မမွေးခဲ့ပေမယ့် အမေ့ဗိုက်ထဲမှာ မင်းကို လွယ်ထားရတဲ့အချိန်ကစလို့ အတွေးထဲမှာ အမြဲ လွယ်ထားရတဲ့သူပါ
ငါ့သားလေးမွေးလာရင် ငါ့သမီးလေး မွေးလာရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မောရပန်းရကောင်းမှန်းမသိ ပင်ပန်းရကောင်းမှန်းမသိ နေပူပူမိုးရွာရွာ အလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေ ရှာခဲ့တာ အလုပ်တွေ ကြိုးစားခဲ့တာ အဖေပါ ။
အမေ့နို့ဖိုးကို တစ်သက်ဆပ်လို့ မကုန်ဘူးတဲ့ အဲ့လိုပါပဲ အမေကျန်းကျန်မာမာနဲ့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်အောင် အဖေလဲ ချွေးနဲ့ ရင်းခဲ့တာပါ အဖေ့ချွေးဖိုးကိုလဲ မေ့မထားကြနဲ့
အဖေဆိုတာ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ကမ္ဘာမှာ အချစ်တတ်ဆုံးလူကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ ။ သားတွေ သမီးတွေ မျက်နှာမကောင်းတဲ့ အခါ အမေ့အနားကပ်ပြီး ငါ့သားဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး မေးကြည့်ပါဦး ငါ့သမီးအဆင်မပြေဘူးလား မသိဘူး မေးကြည့်ပါဦးနဲ့ အမြဲ နားပူနာဆာလုပ်တတ်တဲ့လူလေ
မချစ်ပြတတ်ခဲ့တာ ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ သတိမရခဲ့တာ ထမင်းဗူးပြင်ပေးတဲ့အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်တတ်ကြသလို ဆန်အိုးထဲ ဆန်ရှိအောင် ရှာပေးတဲ့ အဖေ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ဖို့ မမေ့နဲ့
အရမ်းကို စိတ်ပူတတ်ပေမယ့် ဒေါသတွေပဲ ထွက်ပြတဲ့အခါ နားလည်ပေးပါ အဖေဆိုတာ လူဆိုးကြီးမဟုတ် ကျွန်တော့ကိုဆို အမြဲ အပြစ်ပဲတင်တယ် အမြဲဆူတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမထားနဲ့ သူ့ဘ၀မှာ ဖြစ်မလာတဲ့အရာတွေ ပိုပြီးများတဲ့ အဖေက ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးအပေါ်ပိုပြီး မျှော်လင့်ချက်ထားတတ်ကြတယ်
ဆင်းရဲတဲ့ မိဘတွေက ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးတွေကို ချမ်းချမ်းသာသာနေစေချင်တာမျိုး စာမတတ်တဲ့ မိဘတွေက ကိုယ့်သား ကိုယ့်သမီးကို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်တာမျိုး အဲ့လို သူတို့ဘ၀တွေနဲ့ မတူတဲ့ ဘ၀တွေကို ရစေချင် ရောက်စေချင်ကြတာလေ
တစ်ခါတစ်ရံ အဖေ ဒေါသတွေ ထွက်တယ်ဆိုရင်တောင် အဲ့တာ ဂရုဏာဒေါသောပါ ဖြစ်စေချင်လွန်းတဲ့စိတ်နဲ့ အားမလို အားမရ ဖြစ်တတ်တာပါ
ကျွန်တော်တို့က အသက်အရွယ်နဲနဲလေးရလာတဲ့အခါ အဖေ့ကို ချစ်တယ်ပြောဖို့ မေ့တတ်လာကြတယ် ငယ်ငယ်ကလို ကိုယ်လိုချင်တာရလာတဲ့အခါတိုင်း အဖေ့ပါးကို နမ်းခဲ့သလို အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အဖေ့ပါးကို နမ်းဖို့ မရှက်ပါနဲ့။
ကြေးဇူးမတငျခငျြနပေါ စတေနာပကျြအောငျတော့ မလုပျပါနဲ့
ယောကျြားတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုတာ လှယျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ယောကျြားကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ကတြော့ လိုအပျခကျြတှေ အမြားကွီးပဲ